April 23, 2018 - All Nepal
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – घरपरिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । शरीर फुर्तिलो रहने छ । चिताएका काम बन्नेछन् । प्रणयसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिने छ । मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ । घरपरिवारमा खुसीको वातावरण आउने छ । […]
डा.अरुणकुमार सिंह गर्मी महिनामा गर्मी सबै मानिसलाई हुन्छ । यो प्राकृतिक र स्वाभाविक पनि छ । गर्मी का दिनमा मानिसहरुलाई गर्मीको अनुभव हुनु एकदम प्राकृतिक कुरा हो । गर्मीमा शरिरबाट पसिना निस्कनु एक सामान्य समस्या हो । कसै कसैलाई जाडा महिनामा पनि सामान्य हिडाइमा पसिना निस्कने गर्छ । मानिसको शरीरमा २० देखि ४० लाखसम्म पसिनाका […]
मह हामी सबैलाई मन पर्ने कुरा हो । यो स्वास्थ्यको लागी निकै प्रभावकारी छ । यही महमा दालचिनी मिसाएर खाने गरेमा यो हाम्रो लागी झन् बडी लाभकारी हुने गर्छ । एउटा अनुसन्धानले मह र दालचिनीको मिश्रणले स्वास्थ्यमा देखापर्ने प्राय समस्या निको पार्ने देखाएको छ । दालचिनीको प्रयोग र यसले पुर्याउने फाइदा बारे हामी अन्जान नै […]
डा राकेशकुमार यादव मौसममा आउने परिवर्तनसँगै स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छ । जस्तो कि रुघा लाग्ने,ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने आदि । मौसम परिवर्तनको समय इन्फ्लुएन्जाका कीटाणु सक्रिय हुने भएकाले मानिसलाई विभिन्न समस्या देखिन थाल्छन् । संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, बोल्दा मुखबाट निस्किने कीटाणुयुक्त पानीका कण हावाका माध्यमले वातावरणमा फैलिन्छ र […]
युगल दम्पतीसँगको सहवास पुर्व यस्ता खानेकुरा नखाएकै राम्रो, हैन भने ….
एजेन्सी । आफ्नो पार्टनरसँगको समयलाई सुखमय बनाउनको लागि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अन्तिम कुरा भनेको खानेकुरा हो । यौन सम्पर्क गर्नुअघि तपाईले के खानुहुन्छ भन्ने कुुराले तपाई यौन सम्पर्कको अनुभवलाई निकै प्रभाव पार्न सक्छ । तपाईले खाने सामान्य खालको खानाले पनि पेटको खराबी निम्त्याउन सक्छ अथवा तपाईको हर्मोनमा असन्तुलन ल्याइदिन सक्छ । जसले तपाईको यौनइच्छामा नै […]
मुटुमा समस्या आउनुभन्दा समयमै सचेत हुनुहोस, डा. त्रिपाठीले डरलाग्दो यस्तो चेतावनी …
हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपुर्ण अंग भनेको मुटु नै हो । मुटुले एकैछिन मात्र काम गर्न छोड्यो भने, हाम्रो तत्कालै ज्यान जान्छ । यति महत्वपुर्ण मुटुको सुरक्षाको लागी हामीले के गरीरहेका छौ त ? पेट, छाती तथा मुटु रोग बिशेषज्ञ डा. आशिष त्रिपाठीले मुटुको बारेमा एउटा डरलाग्दो चेतावनी दिएका छन । डा. त्रिपाठीको यो कुराले तपाईलाई […]
शिर देखी पाउँ सम्म दिमागमा भएको समस्या देखी बिबिध रोगका समस्यामा परेका लागि “होलबडी चेकअप” कस्ता खाले रोगका बिरामीका लागि एव नेपालमा कुन कुन ठाउमा उपलब्ध छ ?
नेपाली समाजमा बिरामी नभई स्वास्थ्य जाच नगर्ने प्रचलन छ तर हिजोआज जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सजगता बढ्दै गएको छ। समय-समयमा आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चलन सुरु भएको छ। आमनागरिकको यही सचेतना बुझेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूतिर आकर्षित गर्न स्वास्थ्य परीक्षणका विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गर्छन्। तिनै मध्येको चर्चित प्याकेज हो, ‘होलबडी चेकअप’ अर्थात शारीरिक परीक्षण। होलबडी चेकअपबारे धेरैले […]
नेपालको भुमी भारतबाट फिर्ता गर्न माग बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस्तो पत्र ? (भिडियो सहित) Minister for Foreign Affairs Pradeep Kumar Gyawali has said that it wasamatter of pride for Nepal to work together with China in the historic mission of Belt and Road Initiative (BRI) for greater peace, prosperity and harmony. Addressinga[…]